Obasanjo's letters: Ndị isiala chịrị Naijiria Obasanjo jiri edemede leta degide - BBC News Ìgbò
Obasanjo's letters: Ndị isiala chịrị Naijiria Obasanjo jiri edemede leta degide
23 Jenụwarị 2019
Onye chịbuuru Naijiria bụ Olusegun Obasanjo, abụrụla okwu akpụ n'ọnụ ugbu a dịka ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria siri dị.
A marala nwa amadị a dịka onye anaghị asọ eze anya tupu ọ gwa ya okwu.
'Edemede Obasanjo bụ egwuregwu ndọrọndọrọ'
Atiku ka Buhari mma - Obasanjo
O jirila mkpịsị odee ya were menye ụfọdụ ndị chịrị Naijiria ụjọ n'anya, bụkwa nke mechara chụpụ ụfọdụ n'ime ha n'ọkwa.
Ndị isiala ahụ bụ ndị a:
Alhaji Shehu Shagari:
Onye a chịrị Naijiria site n'afọ 1979 - 1983, bụ onye mbụ Obasanjọ bu ụzọ menyụọ anya site n'edemede leta ọdegaara ya mgbe e duchara ya n'iyi ọrụ nke ugboro abụọ dịka onyeisiala n'ọnwa Ọktoba 1, 1983.
Ozugbo oweere oche dịka onyeisiala nke ugboro abụọ, Obasanjọ pụtara ihie ma katọọ ọchịchị ya bụ nke nọchiri anya ya dịka onyeisiala, ma kọwaa ya dịka nke na-agba ọnyụpa n'okwu akụnaụba, ma bụrụkwa nke tinyere ụmụ Naijiria n'oke ụbịa m.
Isiokwu di n'akwụkwọ Obasanjo degara Buhari
O nyekwara mkpesa banyere etu mpụ si bawanye na Naijiria. Nke a nyere aka ma kpọbata ndị agha n'ọchịchị.
Nkenke aha onyonyo IBB ejighị ahụ.
Nwa amadị a chịrị Naijiria dịka onye agha bụ onye nke abụọ mkpịsị odee Ọbaasanjo metụtara.
Nke a bidoro mgbe ọchịchị ahụ wepụtara atụmatụ e ji ebelata ụbịam a kpọro 'Structural Adjustment Programme' (SAP) n'aha bekee.
Ihe m jiri gbaghara Atiku - Obasanjo
A kọwara nke a dịka atụmatụ mere ka ụbịam bawanye. Nke a mekwara ka Obasanjọ gaa n'ihu n'ịgba ọchịchị ahụ ụkwụ ruo na ngwụcha ya.
Nkenke aha onyonyo Abacha nwụrụ na ọche ka onyeisiala Naịjirịa n'afọ 1998
N'agbanyeghị na ọtụtụ mmadụ nọọrọ na-atụ ọchịchị ndị agha nke Sani Abacha nọ n'isi ya ụjọ, Obasanjo gakwara n'ihu ma gosi ya onye ọ bụ mgbe ọ nọọrọ n'otu ụlọ ọgbakọ Arewa katọọ ọchịchị Abacha, ma kọwaa ya dịka nke kpuru isi.
Na mkparịtaụka ya na ụlọọrụ BBC nwere n'oge ahụ, Obasanjo boro ọchịchị Abacha ebubo irikpọ akụnaụba Naijiria dịka onye ọkwọụgbọ mmiri mmanya na-egbu.
'Ọchịchị Buhari dịka nke Abacha' - Obasanjo
Abacha mere ya ka ọma n' ọnya, bụ nke mere e ji tụọ ya mkpọrọ.
Ọ nọọrọ n'ụlọmkpọrọ rue mgbe Abdulsalami Abubakar weghara oche ọchịchị dịka Abacha nwụchara.
Nkenke aha onyonyo Ọ bubuuru onyeisiala Naijiria
Umaru Musa Yar'Adua:
Ọchịchị a weghara oche dịka Ọbasanjo chịchara afọ asatọ mgbe ọchịchị ọhakarasi lọghachịtara n'afọ 1999.
Mana adị m na mma Obasanjo na Yar'Adua bidoro dawa aja aja ozugbo nwaamadị a hụtara na ọchịchị Yar'Adua na-agba ọnyụpa
Obasanjo na Atiku ga-adawa isi- APC
Obasanjo kwupụtara uche ya n'edemede odere sị, ''Dịka ịma, n'ọnwa ole na ole na-abịa, a ga-ewe ọchịchị gị dịka nke n'ọnọdụ ndapụ nke ọchịchị Obasanjo, ma eleba anya n'ọnọdụ wetara gị n'ọchịchị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji gbalịsia ike ma wepụtara onwe gị nakwa ọchịchị gị njirimara pụrụ iche''.
Oge Yar'Adua nwụrụ n'ọkwa n'afọ 2010, osote ya bụ Goodluck Jonathan banyere n' ọkwa onyeisiala.
N'ime afọ abụọ e duchara ya n'iyiọrụ dịka a họpụtachara ya n'afọ 2011, nsogbu ya na Ọbasanjọ bidoro.
N'edemede leta o degaara ya bụ nke ọ kpọrọ ''Tupu Oge Agaa'', Obasanjo kwuru na o mere ka ọhaneze mata nke a n'ihi na od egarala Jonathan akwụkwọ a ugboro anọ, bụkwanụ nke ọ zaghachighị.
Ị nwere ike zuo Naịjirịa niile ga-iru ma ọ bụrụ na ị bụ onye APC - Obasanjo
O kwuru, ''Ọnọdụ obodo a ugbu a nakwa ihe nwere ike ịbụ mpụtara ya mere m jiri n'ekwu tupu ụzọ emechie n'ihe gbasara ịkwalite adịm mma obodo anyị, ma gwa gị na egwu nọ n'ụzọ''.
Onyeisiala na-achị Naijiria ugbu a bụ Muhammadu Buhari, bụkwa onye nwetara nkwado pụrụ iche site n'aka Obasanjo n'afọ 2015, hụtakwara akparamagwa nwaamadị a dịka odee akwụkwọ ozi na 2018 n'ime afọ atọ ọ nọọrọ n'ọkwa n'ọchịchị.
Ọ gwara ya ka ọ kwụsị echiche ya ịzọgharị ọkwa onyeisiala n'afọ 2019, n'ihi na aka ọrụ ya kemgbe ojiri weghara ọchịchị, akụdala mụọ ndị Naijiria, bụ ndị tụnyeere ya vootu n'afọ 2015.
Obasanjo edegara Buhari akwụkwo ozi ugboro abụọ.
Na mkparitaụka ya na BBC nwere n'ọnwa Jenụwarị, 2019, Obasanjo kwuru na ọchịchị Buhari akụọla afọ n'ala, ma kwupụtakwa nkwado ya nye Atiku Abubakar nke otu pati PDP.
'National Council of State' ekwetala ka a kwụọ 27,000 ụgwọ opekatambe
Day 25: Nkọwa okwu mgbagwoju anya maka ntuliaka
Ndị ndọrọndọrọ anọghị n'ọchịchị chọrọ ibute ọgbaghara na ntụliaka - Lai Mohammed
Vidio Buhari : Iwe Obasanjo bụ na Buhari gbochiri ebe e si ebupụsị ego
22 Jenụwarị 2019
Vidio Olusegun Obasanjo: Ihe Atiku ji kara Buhari mma
Ihe ndị pụtara n'akwụkwọ Obasanjo degara Buhari
24 Jenụwarị 2018
Akụkọ Mere Ugbua -Ihe a mabeghị ihe ọ bụ gbara n'Enugwu
'Anyị na-akwadọ ntuliaka echi'
Nkwado Ntuliaka: Ka o si gaa n' Ọwụwa-anyanwụ n'ụbọchị foro ntuliaka